Fahaizana, fanatanjahan-tena ary fianarana ho an'ny biby fiompinao | Tontolo alika
Azo antoka fa ny Lalao fanatanjahan-tena, ary efa hitanao izany indraindray. Fanatanjahantena kaninina ity ka ny alika dia tsy maintsy manao làlana misakana amin'ny fotoana fohy indrindra. Hevitra tsara ho an'ny alika ny manaitaitra ny sainy ary milalao fanatanjahan-tena miaraka amin'izay.
Betsaka ny olona manatevin-daharana ity fanatanjahantena ity, izay azo atao ao an-trano, na dia mba hifaninana amin'ny fomba ofisialy aza dia tsy maintsy atao nisoratra anarana tao amin'ny klioban'ny Agility, miaraka amin'ny fizarana isam-bolana. Ny alika kely sy salasalany dia afaka mifaninana hatramin'ny 20 kilao, manomboka amin'ny 18 volana ka hatramin'ny folo taona.
Mba hanombohana dia afaka foana isika mitaingina làlana misakana ao an-trano, ho an'ny alika manao fanazaran-tena, na dia ao amin'ny klioba aza misy boribory miaraka amin'izay ilainy. Ny niandohan'ity fitsipi-pifehezana ity dia nanomboka tamin'ny taona 1978 tany Royaume-Uni, rehefa nanomboka natao tamina fifaninanana hatsaran-tarehy an-tenda.
Betsaka ny tombony azo amin'ny antony tsara hanaovana fanazaran-tena ity fanatanjahantena ity. Ny tena manamarika dia ny tompony sy ny alika hanao fanatanjahantena tsy tapaka izy ireo, mijanona amin'ny endrika milamina. Ho an'ny alika dia fiofanana izay hitazomana azy hahay handanjalanja ary hampihena ny adin-tsaina sy ny tebiteby, ka ho lasa alika mahay mandanjalanja izy.
Amin'ny lafiny iray, ny ny fifandraisana sy ny fifandraisana misy eo amin'ny tompony sy ny alika fanavaozana ny. Izany dia mahatonga azy ireo handany fotoana hiarahan'izy ireo mifampiresaka sy mifankahazo izay manamafy ny fifandraisana eo amin'izy ireo. Ho hitanao ny fomba fifandraisanao tsara amin'ny biby fiompinao.
Ity iray ity disiplina Izy io koa dia manampy amin'ny fanatsarana ny fanabeazana sy ny fifehezana ny alika, satria rehefa manao ny fizaran-tany dia tsy maintsy mankatò ny torolalan'ny tompony. Fomba iray fampianarana azy ireo hankato amin'ny fanofanana tena miabo ho azy ireo, manome valisoa azy ireo amin'ny zava-bitany. Ho fanampin'izay, fanambin'ny fahakingan-tsaina sy fahakingan-tsaina ho azy ireo izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Fahaizana, fanatanjahan-tena ary fianarana ho an'ny biby fiompinao
Ny karazany 5 lehibe indrindra amin'ny alika